မင်းဘူးမြို့ တိုးချဲ့မြို့ရေပေးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ~ Myaylatt Daily.
မင်းဘူးမြို့ တိုးချဲ့မြို့ရေပေးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
3:42 PM သတင်း No comments
မင်းဘူး နိုဝင်ဘာ ၁၃
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မင်းဘူးမြို့နယ်၏ ရပ်ကွက်နေပြည်သူအများ သောက်သုံးရေ ဖူလုံးစွာရရှိနိုင်ရန် အတွက် နိုင်ငံတော်မှ တိုးချဲ့ မြို့ရေပေးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနေလျက်ရှိသည်။
မင်းဘူးမြို့သည် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းအနောက်ဘက်၊ကုန်းမြင့်ပိုင်းဒေသတွင် မြို့တည်ထားသည့်အတွက် မြေအောက်ရေ တူးဖော်ရန်အခက်အခဲရှိသဖြင့် မြို့နှင့် တစ်မိုင်အကွာရှိ ကျောက်တန်းကျေးရွာမှ မြေအောက်ရေအား ရေတင်စက်ကြီးများဖြင့် ဖြန့်ဝေပေးနေလျက်ရှိသော်လည်း သောက်သုံးရေ မလုံလောက်သဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ ဧရာဝတီမြစ်ရေတင်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီး မြို့ရေပေးရေးလုပ်ငန်းအား တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
တိုးချဲ့မြို့ရေပေးရေးလုပ်ငန်းအား ပွင့်ဦးကုမ္ပဏီမှ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းကောင်း ၊WWWကုမ္ပဏီမှ ရေတင်/ရေဖြန့်ဝေပိုက်လိုင်များသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်းကောင်း၊ဟန်စိန်သန့် ကုမ္ပဏီ မှ ရေမြုပ်ပန့်နှင့် ရေတင်စက်များတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းမှ လျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို နိုင်ငံတော် ထောက်ပံ့ငွေ (၁၆၃၄ ဒဿမ ၅၃ )ကျပ်သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက် နေလျက်ရှိသည်။
မင်းဘူးမြို့တွင် ရပ်ကွက်(၄)ရပ်ကွက်၊ အိမ်ခြေ(၅၂၀၅)အိမ်၊လူဦးရေ(၂၉၈၈၆)ဦးရှိပြီး၊တစ်ရက် သောက်သုံးရေ ဂါလံ(၆)သိန်းခန့်လိုအပ်လျက်ရှိရာ လက်ရှိ တစ်ရက်ရေဂါလံ(၄၁၀၀၀၀)ဖြန့်ဝေပေးနေလျက်ရှိပြီး တိုးချဲ့မြို့ရေပေးရေးစက်ရုံတည်ဆောက်ပြီးစီးပါက တာဘိုင်ရေစက်ရုံ၊လိပ်တောင်ရေလှောင်ကန်၊အောင်မြေရေ လှောင်ကန်နှင့် မြစ်ရေတင်တို့မှတဆင့် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နေပြည်သူအများ အား သောက်သုံးရေ ဖူလုံစွာဖြန့်ဝေပေး နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြေလတ်ဂျာနယ် အတွဲ ၁ အမှတ် ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့မှ ထွ...
ဆေးလိပ်မီးပေါ့ဆစွာ စွန့်ပစ်၍ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ဆိုင်ကယ်မဆင်မခြင် မောင်းနှင်၍ လမ်းဘေးမြေနီပုံဝင်တိ...
လူမှုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မြို့နယ်အဆင့် သက်ဆိုင်သူအဖွဲ့...
အရပ်ပြဇာတ်ကစဉ် ယမ်းထုပ်အားရှော့တိုက် ဖောက်ခွဲရာမှ ...
ဆေးဖျန်းပုံးဝါရှာမကောင်း၍ ပါးစပ်ဖြင့်စုပ်စဉ် ပိုးသ...
(၂၈)ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှ...
မင်းဘူးခရိုင် ဌာနဆိုင်ရာများ၏ စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပ...
(၁၈)ကြိမ်မြောက် ၀န်ထမ်းပေါင်းစုံ စုပေါင်း မဟာဘုံကထ...
မြို့လုံးကျွတ်ဘုံကထိန် ပဒေသာပင် လှည့်လည်ကျင်းပ
(၄၇ )ကြိမ်မြောက်ဆွမ်းlဆွမ်းဟင်းနှ င့်စာရေးတန်မဲမျ...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနတ်မောက်မြို့ တွင်ဓမ္မရောင်ခြည် ...
ပွင့်ဖြူ၌ ရဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား အသိပေးရှင...
ပွင့်ဖြူမြို့နယ်တွင် မိုးစပါးပုလဲသွယ်စပ်မျိုးစပါး ...
၂၅ ကြိမ်မြောက်ဌာနဆိုင်ရာစုပေါင်း ဘုံကထိန်ပွဲကျင်းပ
ဆိုင်ကယ်မှ လမ်းဖြတ်ကူးသူအား တိုက်မိ သေဆုံး
သဘာဝသစ်သီးဝလံ အခြေခံစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု သင်တန်း...
ပုသိမ်-မုံရွာလမ်းတွင် ထော်လာဂျီနှင့် ဆိုင်ကယ်တို့ ...
မြေလတ်ဒေသ သတင်းစာမှ သတင်းအသစ်များခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်...
မြေလတ်မီဒီယာစင်တာ(မင်းဘူး) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဖွင...
ကျေးရွာသုံးထင်းစိုက်ခင်းအားေ ဒသခံပြည် သူများသို့လဲ...
မကွေမြို့တွင် Civil Service Training သင်တန်းပို့ချ
တောင်မန်းကျေးရွာတွင် ၀ါးအခြေခံလက်မှုထည်လုပ်ငန်း သင်...
မကွေမြို့တွင် Civil Service Training သင်တန်းဖွင့်ပ...
မြိုင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ...
မြို့သစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကာလ လုံခြုံရေး တာဝန် များ ...
မင်းဘူးမြို့ တိုးချဲ့မြို့ရေပေးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွ...
မိုးစပါးများအား ဖျက်သိမ်း၍ ဆောင်းသီးနှံကုလားပဲမျာ...
မီးပေါ့ဆစွာသုံးစွဲ၍ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကာ လူသေဆုံးမ...
စေတုတ္တရာမြို့နယ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် အမှိုက်သိမ်းယာဉ်(၁...
ပေါက်မြို့နယ်တွင် ကလေးငယ်တစ်ဦး ဓါတ်လိုက်သေဆုံး
မြေလတ်ဂျာနယ် အတွဲ(၁) အမှတ်(၁၉) နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့...
UEC က တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပြီ
တစ်နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ မဲရုံပေါင်းလေးသောင်းကျော်မှာ ...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မဲရလဒ်များ အပိုင်း(၁) ၉-၁၁-၂၀၁၅
တောင်တွင်းကြီးမြို့ပေါ်တွင် မီးပေါ့ဆစွာ သုံးစွဲ၍ မီ...
မကွေးမြို့ပေါ် ၁၅ရပ်ကွက်တွင် NLD အပြတ်အသတ်နိုင်
မင်းဘူးမြို့ အမှတ်၁ ရပ်ကွက် မဲရုံ၆ မဲပေးမြင်ကွင်း
ကဲ ကြည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတဗျ တန်းစီမဲပေးတာကိုမကြည့်န...
ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းမိသားစု လားရှိုးမြို့န...
ထောက်လှမ်းရေးမှူးဟောင်း ဦးခင်ညွန့် နဲ့ဇနီး အမက (၁...
မင်းဘူးမြို့ အမှတ်၂ရပ်ကွက် မြို့မကျောင်းမှာ မဲရုံ၂ရုံ
ဧရာဝတီ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းအောင် ဒီမိုကရေစီကိုဖော...
မဲပေးရတာ လွတ်လပ်တယ် ဘာဖိအားမှမရှိ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပါ...
အမှတ်၁ ရပ်ကွက် သ်ိမ်ကုန်းကွက်သစ် မင်းဘူးမြို့ လူ၂၀...
ဒီကနေ့မဲသွားပေးခဲ့ပါတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း မဲရုံထဲဝင...
မင်းဘူးမြို့ အမှတ်၁ မဲရုံ၅ ပြည်သူလူထုမဲပေးမြင်ကွင်...
မကွေးတိုင်း ရေနံချောင်းမြို့နယ် အုတ်ရှစ်ကုန်းကေ...
မဲလက်မှတ်တွေကို ဘယ်လိုရေတွက်မှာလဲ? .
တောင်တွင်းကြီးမြို့ ယနေ့ နိုဝင်ဘာ (၈) ရက် နံနက်ပို...
တပ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်မဲပေးရင်း NLD အနိုင်ရလျှင် ဆ...
လူအုပ်ဖြင့် လိမ်လည်ပြီး မဲပေးရန် ကြံစည်မှု မန္တလေး တ...
မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဘုန်းမော်ရွှေနှင့် မိသ...
မကွေးမြ်ို့ ဒီနေ့မနက် ၃နာရီ မှ ၇နာရီ အတွင်း မြင်ကွ...
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အား မနက်ဖန် နိုဝင်ဘာ ၉ ရက် ၉ နာရီ ...
သမ္မတဦးသိန်းစိန်မဲပေးမည့် မဲရုံတွင် ဖုန်းလိုင်းဖြတ...
ညွှန်ကြားချက်ဟုဆိုကာ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးသော အချုပ်သားမျ...
ကြီးမားသည့် ကိစ္စရပ်များ အမျိုးသမီးများ မဆုံးဖြတ်သင...
၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ...
သရက်မြို့ နယ်စည်ပင်သာယာရုံး မှာ အလံဇောက်ထိုးတင်ထား...
ရေနံချောင်း နေကောင်းပါစေ (၁၂)
သရက်မြို့ စည်ပင်သာယာဈေးကြီးတွင် နိုဝင်ဘာ l၁-၂-၃-၅...
ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်တိုင်ကြားရေး mWatcher app
တောင်တွင်းကြီးမြို့တွင် ဒေသခံပြည်သူများ စိတ်အနှောင...
၂၀၁၅-ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒရှင်များ ...
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး ပွဲမဝင်ခင် NLD ဆုံးရှုံး
ပါတီစည်းရုံးအလုပ် သမ္မတမလုပ် ချစ်ခင်သူများက ကြည်သာရ...
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမိန့်ခွန်း န...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု...
တောင်တွင်းမြို့နယ်ခန်းမ nld ပါတီကိုယ်စားလှယ်လေါင်း...